Uyenza njani incwadana | Abadali be-Intanethi
Ngaba wakha wathunywa incwadana enemifanekiso? Ngaba uyenzile okokuqala okanye kufuneka utshintshe izinto kuba umxhasi wayengazithandi? Ngaba uyayazi indlela yokwenza incwadana yokwamkela okokuqala?
Ukuba ufuna ukuba neziseko zokwenza incwadana ephumeleleyo, ukuba akukho mthengi unokukubuyisela emva, ngoko kufuneka ujonge oko sikulungiselele kona.
1 yintoni incwadana
2 Iinkalo ezimele ziqwalaselwe kwincwadana enemifanekiso
2.1 Khetha umxholo wencwadana yakho
2.3 Uthungelwano loluntu / Uqhagamshelwano / Ilogo
3 Indlela yokwenza incwadana enemifanekiso nabani na afuna ukuba nayo
3.1 Hlela uxwebhu lokubhaliweyo
3.2 Qinisekisa ukuba iza kuba yintoni iinxalenye zale ncwadana
3.3 ixesha lokuyila
3.4 Ngalo lonke ixesha, rhoqo, rhoqo ... shicilela
Incwadana enemifanekiso inokuqondwa njengombhalo oprintwe ngendlela ethile, ngokuqhelekileyo kumaphepha amancinane efomathi ezahlukeneyo kwaye ukusetyenziswa kwawo kukubhengeza. Ngaphambili, ezi ncwadana zinemifanekiso zazihanjiswa ngesandla okanye zazifumaneka kwindawo yokwamkela iinkampani. Kodwa ngoku sele ziqalile ukusasazwa ngeposi okanye nange-imeyile, kwifomathi yedijithali.
Eyona nto ixhaphakileyo yincwadana yoxande eyahlulwe yangamacandelo amathathu, iyonke ngamacala ama-6 ombhalo kunye nemifanekiso; izinto ezibizwa ngokuba zii-triptychs. Nangona unako ukuthatha i-diptychs.
Iinkalo ezimele ziqwalaselwe kwincwadana enemifanekiso
Xa usenza incwadana enemifanekiso, ufanele unikele ingqalelo kwiinkalo ezithile ezibalulekileyo, oko kukuthi, izinto omele uziqwalasele nezivela kuzo zonke iincwadana ezinemifanekiso, ewe okanye ewe. Ngaphandle kolu lwazi, ukwenza enye kukufutshane nokuba akunakwenzeka, okanye uya kugqiba usilele kwaye ungafumani lonke uncedo onethemba lokulufumana.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni efunekayo?
Khetha umxholo wencwadana yakho
Khawucinge ukuba unenkampani. Le nkampani ifuna ukuzazisa kubatyali-mali abanokubakho. Kwaye uthatha isigqibo sokuba kwincwadana yakho awuyi kuthetha kuphela ngenkampani, ngubani oyenzayo, iinkonzo, iinjongo ... kodwa kunye nendlela abanokusebenza ngayo kwinkampani.
Kwaye ngoku siyakubuza, ngaba umtyali-mali unomdla wokucela umsebenzi kwinkampani yakho? Eyona nto iqhelekileyo kukuba, xa befikelela kwelo nqanaba, baze babone ukuba lulwazi olungenamsebenzi kubo, bayayilahla ingcamango.
Kubaluleke kakhulu ukucaca malunga nabaphulaphuli ekujoliswe kubo oza kujongana nabo kuba kuphela emva koko uya kuba nakho ukwazi ukuba luhlobo luni lolwazi omele ulufake kwincwadana.
Kwaye ewe, sithetha ngetekisi. Udinga uxwebhu lokubhaliweyo apho yonke into ofuna ukuyibeka yenziwe isakhelo. Iya kubekwa kamva, kodwa ukuba nolwazi, kuya kuba lula ukusebenza nayo.
Ngalo lonke ixesha umgangatho. Kukho abo baxuba imifanekiso kunye ne-vectors, ukuvuselela uluhlu oluthile okanye amanqaku. Akukho ngxaki ekuyenzeni ukuba nje ingasetyenziswa kakubi kakhulu.
Ukusetyenziswa kwemifanekiso kukhulula ukubona isicatshulwa kuphela, kwaye kuyenza ibonakale ngakumbi.
Uthungelwano loluntu / Uqhagamshelwano / Ilogo
Inqaku elibalulekileyo, kwaye abaninzi balibale, kukubeka uphawu lwenkampani (ngokwesiqhelo kumaqweqwe angaphambili nangasemva) kunye nohlobo loqhagamshelwano kunye/okanye neenethiwekhi zentlalo ukuze abantu bakwazi ukuzifumana.
Loluphi ulwazi oluyimfuneko? Igama lenkampani, iwebhusayithi, iinethiwekhi zentlalo, i-WhatsApp (ukuba ikhona), i-imeyile kunye nomnxeba.
Ngale nto uya kube unika abasebenzisi indlela yokunxibelelana nawe ukuba bebenomdla kulwazi olungaphakathi kwincwadana.
Indlela yokwenza incwadana enemifanekiso nabani na afuna ukuba nayo
Kwinqaku elidlulileyo besinokukuxelela malunga nokuhlelwa okuhle okanye inkqubo yoyilo yokwenza iincwadana kodwa inyani kukuba, njengoko zininzi kwaye kulula kakhulu ukufumana usetyenziso kunye neewebhusayithi ezikuncedayo ukuba uyiyile, asiyihoyanga. yona.
Ngale nto sikuxelele yona, uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukuze uye emsebenzini, nokuba uyayibeka kwiLizwi, kwiPhotoshop okanye ngesicelo esiphathwayo.
Masihambe namanyathelo ekufuneka uwathathe?
Hlela uxwebhu lokubhaliweyo
Siqala ngeyona nto inzima, kwaye yintoni eya kukuthatha iiyure ezininzi. Yaye kukuba ulwazi olufakileyo kolo xwebhu lunokuba lukhulu kakhulu kwincwadana enemifanekiso, kwaye kufuneka lushwankathelwe. Kodwa, ukongeza, kufuneka yenziwe ukuba ifundeke kubasebenzisi.
Sithetha ukuthini? Ewe, siyayidinga ukuba ibe nefuthe, isebenze ukuze bangalibali imizuzwana engama-30 emva kokuyifunda. Kule nto, ukukopa kunye nokubaliswa kwamabali kubalulekile.
Qinisekisa ukuba iza kuba yintoni iinxalenye zale ncwadana
Ukuba awuyazi, le ncwadana ineenxalenye ezininzi ezibalulekileyo zezi zilandelayo:
Isiphathi cap. Yinto esinokuyibiza ngokuba siqweqwe kwaye sesona kufuneka senze olona phawu lubalaseleyo ukuba ufuna ukusivula.
Izihloko zangaphakathi. Ziyimibhalo engezantsi efuna ukulungelelanisa ulwazi kwaye kwangaxeshanye itsale ingqalelo.
Isicatshulwa. Inxalenye yomgangatho, ishwankathelwe kwaye ilawula ukunxibelelana nomfundi.
Imifanekiso. Ibekwe ecaleni kwesicatshulwa ukuyenza ibenzima kakhulu.
Ukuvala uphawu. Kuya kuba yisigqubuthelo sangasemva kwaye, njengesigqubuthelo, kufuneka kwakhona ushiye "ukunambitheka okulungileyo emlonyeni".
Sincoma ukuba wenze umzobo usasaze indawo nganye ukuze ubone ukuba yonke into iya kujongeka njani ngaphambi kokuba uqalise ukuyila.
Enyanisweni, kukho iinkqubo ezininzi ezinokukunceda ukwenza oku, ukusuka kwezona zilula njengeMicrosoft Word okanye iGoogle Docs ukuya kwezona zintsonkothileyo ezifana neAdobe inDesign, LucidPress, Photoshop...
Umele uluthathele ingqalelo uhlobo lwencwadana enemifanekiso oza kuyilwa, ngokukodwa ukuze usasaze inkcazelo ngendlela yokuba, isongiwe, nganye ibe sengqiqweni.
Ngeli xesha uyilo lunokuthi luqhutywe ngeetemplates (zombini zikhululekile kwaye zihlawulwe) okanye ukuqala ukusuka ekuqaleni. Ukuba unamava, le yesibini ikunika inkululeko engakumbi kwaye unokudala uyilo olwahlukileyo; ngeyokuqala uya kukhawulelwa ngakumbi kwindawo, ubungakanani bemifanekiso kunye noyilo.
Xa uyila, kufuneka uthathele ingqalelo oku kulandelayo:
Musa ukusebenzisa imibala engaphezu kwemibini okanye emithathu. I-Minimalism iyona nto ibhetele kuba ukuba ubeka imibala emininzi ekugqibeleni, abantu bayahlakaza okanye bakhazimle kangangokuba abayi kuyithanda.
Musa ukusebenzisa iifonti ezingaphezu kwesibini. Kuba kwanjalo; uya kuphulukana ubuntu ngokusebenzisa eziliqela. Sebenzisa enye yezihloko nezihlokwana kunye nenye yesicatshulwa.
Yiyeke iphefumle incwadana. Ngale nto sifuna ukukuxelela ukuba ungayilayisha kakhulu. Kubalulekile ukuba ushiye indawo kuyilo ukuze abantu bangaboni ulwazi oluninzi kwaye baxakeke (kwaye bangayifundi).
Ngalo lonke ixesha, rhoqo, rhoqo ... shicilela
Ngaphambi kokuba uprinte inani elilungileyo leencwadana, kubalulekile ukuba uprinte enye, nakwiprinta yasekhaya. Injongo kukukhangela ukuba lonke ulwazi luchanekile, ukuba akukho nto inqunyulwa yimida okanye i-folds kwaye yonke into ihlelwe kakuhle.
Nje ukuba uyenzile, ungabonisa kumxhasi okanye uyithumele kushicilelo lokugqibela.
Ngaba ngoku icacile kuwe indlela yokwenza incwadana enemifanekiso?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani incwadana